लोकप्रिय सुन्दरता प्रश्नहरू तपाइँ सोध्न पनि लजालु थिए
प्रकाशित 17.04.2021 17.04.2021
धेरै केटीहरू भौंको बीचमा कपालको अत्यधिक वृद्धिबाट ग्रस्त हुन्छन्। विरलै अवस्थाहरूमा, त्यस्तो समस्याले गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई संकेत गर्दछ, उदाहरणका लागि, पोलिसिस्टिक अंडाशय रोग। तर नियमको रूपमा यो जेनेटिक कारकको कारणले हो। यस समस्यालाई अस्थायी रूपमा राहत दिनका लागि चिमटी, मोम स्ट्रिप्स, वा डिप्रेलेटरी क्रीमहरू उद्धारमा आउँदछन्। पूर्ण कपाल हटाउनका लागि, इलेक्ट्रिक कपाल हटाउने वा लेजर कपाल हटाउने विचार गर्नुहोस्।
सेल्युलाईट पराजित गर्न सकिन्छ?
एक महिला आफ्नो नितम्बको सट्टामा सुन्तलाको बोक्रा वा दाना दही द्रव्यमान हेर्न चाहँदैन। दुर्भाग्यवश, सेल्युलाईट कसैलाई दया देख्दैन। छाला कम आकर्षक र असमान र बम्पी हुन्छ।
सबैभन्दा प्रभावकारी रोकथाम र उपचार भनेको नियमित व्यायाम हो। र विज्ञापन क्रीम र लोशन प्राय: मद्दत गर्दैन। त्यहाँ मेसोथेरपी, एन्टि-सेल्युलाईट मसाज, शरीर र्याप जस्ता प्रक्रियाहरू छन्।
म किन लज्जित छु?
हामी मध्ये धेरैको लागि लाज हाम्रो शरीरको प्रतिक्रियासँग विभिन्न वातावरणीय कारकहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, जस्तै लज्जा वा लाजबाट लज्जित। तर, यदि छाला निधार, गाला वा चिनमा दागले ढाकिए भने यो सम्भव छ रोसिया... यो पुरानो छाला अवस्था हो र औषधी गोली वा क्रिमको साथ व्यवहार गरीन्छ।
किन कपाल छिटो खैरो भयो?
यदि तपाईं जवान हुनुहुन्छ र तपाईंको कपालको आधा कपाल पहिले नै खरानी छ भने, तपाईं सतर्क हुनुहोस्। धेरै जसो केसहरूमा, प्रारम्भिक ग्रेजिंगले थाइरोइड ग्रंथि वा पिग्मेन्टेशनको खराबीलाई स indicates्केत गर्दछ।
सबैभन्दा सामान्य कारण वंशानुगतता हो। भाग्यवस, सानो उमेरमा खैरो कपालको मतलब यो होइन कि तपाईंको शरीर अरू भन्दा ठूलो छ।
मेरो फिलामा एक्ने ठाउँ कहाँ आउँदैछ?
यो छाला दोष हो जुन फोलिक्युलर केराटोसिस भनिन्छ। यो छालाको अवस्था हानिरहित छ, तर धेरै आकर्षक छैन। केराटोसिसको अभिव्यक्ति फिला, फिर्ता र फोरमर्समा हुन्छ। यो डिसअर्डर, एक नियमको रूपमा, लामो समय देखि रहन्छ, र -30०--35 को उमेरमा गायब हुन्छ। त्यतिन्जेल, छालाको लागि राम्रोसँग नमीको उत्पादनको सहयोगले रोगको अभिव्यक्ति कम गर्न सम्भव छ।
स्ट्रेच मार्कहरू कहाँबाट आउँछन्?
जब हाम्रो छाला तौलको बखत धेरै तन्किन्छ वा यसको विपरित, यसको कडा हानी, गर्भावस्थामा, दाग टिश्यू गठन गर्न सकिन्छ, वा तिनीहरूलाई "स्ट्रेच मार्क" पनि भनिन्छ। सुरुमा, तिनीहरूको रंग रातो हुन्छ, तर बिस्तारै यो सेतो हुन्छ।
प्राय: जसो स्ट्याच मार्कहरू नितम्ब, फिला, तल्लो पछाडि, पेट र छातीमा देखा पर्दछ। यो छुटकारा पाउन असम्भव छ, तर तपाईं तिनीहरूलाई कम ध्यान दिन सक्नुहुन्छ - शल्य चिकित्सा वा रासायनिक पिलिंगको सहयोगमा। सबै प्रकारका क्रिमहरू र लोशनहरू प्रायः बेकार हुन्।
किन सास फेर्छ?
हरेक दिन दाँत माझ्नु भएपछि, विशेष दन्त फ्लोसको प्रयोग गरेर, के सास फेर्नु प्रासंगिक छ? तपाईलाई गम रोग, सुख्खा मुख र साइनस संक्रमण हुन सक्छ। तर सम्भवतः तपाईले आफ्नो डाईट परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। एकल होईन, सब भन्दा ब्रान्ड गरिएको महँगो टुथपेस्टले पनि प्याज वा लसुनको लगातार गन्धलाई हटाउन मद्दत गर्दछ।
लेजर छीलो: समीक्षा
बायोरिभिटलाइजेशन वा मेसोथेरपी: जुन उत्तम छ
पछाडि तन्काउने अंकहरू: कारणहरू बुझ्न
केराटोलाइटिक ड्रग्स: नाम र आवेदन विधि
पीरियडोन्टाइटिस, कारण, निदान, उपचारको वर्गीकरण
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,434 प्रश्नहरू।